Boqorka Sacuudiga oo isbedel Taariikhi ah ku sameeyay nidaamka dhaxal tooyada Sacuudi Carabiya – Radio Muqdisho
Boqorka Sacuudiga oo isbedel Taariikhi ah ku sameeyay nidaamka dhaxal tooyada Sacuudi Carabiya
Boqor Salman ayaa shaqadi ka ceyriyay walaakiiisa ka yar ee ay isku hooyada yihin, kaas oo ahaa dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga, isagoo u magacaabay wiilka uu adeerka u yahay ee Maxamed Bin Neyef oo ah Ra’iisul wsaare ku-xigeenka dalka, Wiilkaan ayaa noqonaya dhaxal sugaha Sacuudiga.
Arrintaan ayaa lagu shaaciyay wareegto laga aqriyay TV-ga dowladda Sucuudiga.
“Waa isbeddel aad u weyn oo taariikhi ah oo ka dhacaya dalka Sacuudiga, sababto ah tani waa markii ugu horreysay oo wiil uu awoowo u yahay aasaasaha Sacuudiga in dalka uu ka noqdo dhaxal sugaha boqortooyada, iyada oo markii hore kaliya wiilsha uu dhalay Boqor Sacuud in ay dalka soo maamulayeen.
Boqor Salmaan ayaa sidoo kale Wasiirka arimaha dibaddau magacaabay Sacuud Al-Faysal oo lagu bedlay Safiirka Sacuudiga ee Mareykanka.
Khilal Jahshaan oo ah agaasimaha xarunta carabta ee Washington oo la hadlay Al-jazeera ayaa isbedelkaan ku tilmaamay mid dhul gariir siyaaseed ah.
“Tani waa jawaab muhiim ah oo uu bixiyay boqor Salmaan iyada oo dad badan ay shaki ka muujinayeen caafimaadka boqorka tan iyo markii boqorku uu awoodda la wareegay.
Adbel Aljubeer oo ahaa safiirka Sacuudiga ee Mareykanka ayaa sidoo kale loo magacaabay in uu noqdo Wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga.
Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Faysal oo muddo dheer shaqeynayay ayaa xilka laga qaaday sababo caafimaadkiisa la xariira, waxa uuna noqon doonaa la taliyaha iyo ergayga gaarka ah ee Boqor Salman iyo kormeeraha guud ee arrimaha dibadda.
Feysal ayaa la magacaaby sanakii 1975, waxa uuna noqday wasiirkii ugu muddada dheeraa ee arrimaha dibadda ee caalamka.
Waa isbedel weyn oo uu sameeyo boqorku tan iyo markii bishii Januaray uu xilka la wareegay kaddib markii uu geeriyoooday walaalkiisa oo xilka boqortinimada hayay.
Bishii la soo dhaafay ayaa loo dhariyay wasiirka arrimaha dibadda ka dib markii boqorku uu xilal kala wareejin ku sameeyay dowlddiisa, hase ahaatee dhowr ruux oo waayo arag ah uu xilkooda u daayay.
Maxamed Bin Nayef Bin Abdulcasiis Al-sacud waxa uu dhashay 30-kii bishii August 1959, waxa uu ahaa ku xigeenka labaad ee Ra’iisul wasaaraha ahan wasiirka arrimaha gudaha ee Sacuudiga, waxaa uu hayay xilka guddomiyaha golaha siyaasadda iyo arrimaha ammaanka.
Waxa uu safka kowaad kaga jiraa carruurta uu awoowaha u ahaa aasaasihii Sacuudiga, waana xubin ka tirsan aqalka Sacuud, waxaana adeer u ah boqorka hadda ee boqor Salman bin Abdulazis.
Ninkaan loo magacaabay dhaxal sugaha boqotoyada Sacuudiga, waxa uu ku dhashay magaalada Jidda, waxa uuna wax ku soo bartay dalka Mareykanka, inastoo uusan dhameysan waxbrashadiisa, waxa uu ka qeyb galay tabar FBI Mareykanku bixisay intii u dhexeysay 1985 ilaa 1988, waxa uu qaatay tababar la xariira ka hortagga argagaxisada.
Maxamed Bin Neyef waxaa sanadkii 1999-kii loo magacaabay kaaliyaha wasiirka arrimaha gudaha ee Sacuudiga, xiligaas uu ahaa nin ganacsade ah, waxaa aad loogu ammaana guulihii uu ka sameeyay ka hortagga argagaxisada.
Shirka Maamul u sameynta Gobollada Mudug iyo Galgaduud oo laga taageeray Sweden